ထမငျးစားပွီးနောကျ မလုပျသငျ့သညျ့ အန်တရာယျ (၈)ရပျ – Candle Myanmar
၁. ဆေးလိပျ မသောကျပါနှငျ့။
ထမငျးစားပွီးနောကျ စီးကရကျ ၁-လိပျသောကျခွငျးသညျ သာမနျ အခြိနျ စီးကရကျ၁၀-လိပျသောကျခွငျးနှငျ့ ညီ မြှပွီး၊ ကငျဆာ ရောဂါဖွဈနိုငျခြေ အလားအလာပိုမြားကွောငျး ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျ မြားက သတိပေးထား သညျ။
၂. သဈသီးမြား အလငျြစလို မစားပါနှငျ့။
ထမငျစားပွီးနောကျ အခြိုပှဲ သဈသီးစားခွငျးသညျ မှားယှငျးသော အစဉျအလာ တဈခုဖွဈနကွေပါသညျ။ အမှနျ အားဖွငျ့ ထမငျးစား ပွီးပွီးခငျြး သဈသီးစားခွငျးက လပှေစပွေီး၊ အစာအိမျကို ဘေးဥပါသျဖွဈစေ၏။ ထို့ကွောငျ့ ထမငျးစားပွီး အနညျးဆုံး နာရီဝကျခနျ့ ကွာမှသာ သဈသီး စားသငျ့သညျ။
၃. လ်ဘကျရညျ မသောကျပါနှငျ့။
လ်ဘကျရညျ အခြိုခွောကျထဲတှငျ အကျဆဈဓာတျ အမွောကျအမြား ပါရှိကွပရော၊ ၄ငျးတို့က ထမငျး ဟငျးထဲ တှငျ ပါရှိသညျ့ ပရိုတငျး မြားကို အနှောငျ့ အယှကျပွုကာ အစာခဖြေကျြမှု ကိုလညျး ဟနျ့တားစပေါသညျ။
၄. ခါးပတျကွိုး မလြော့ပါနှငျ့။
ထမငျး စားပွီးပွီးခငျြး ခါးပတျကွိုး (သို့မဟုတျ) ပုဆိုး၊ လုံခညျြလြော့ဝတျခွငျး က အူသိမျ အူမ တို့ကို လိမျခေါကျ၍ အူလမျးကွောငျး ပိတျဆို့စပေါသညျ။
၅. ရေ မခြိုးပါနှငျ့။
ထမငျးစားပွီးနောကျ ရခြေိုးခွငျးသညျ လကျ/ခွထေောကျနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးရှိ သှေး လညျပတျစီးဆငျး မှု တိုးပှားလာပွီး၊ အစာအိမျ တဝိုကျ သှေးလညျပတျ စီးဆငျးမှု လြော့ကြ လာသောကွောငျ့ အစာ အိမျကောငျး စှာ အလုပျ မလုပျနိုငျတော့ပေ။
၆. သှကျသှကျ လမျး မလြှောကျပါနှငျ့။
ထမငျး စားပွီးခငျြး ခပျ သှကျသှကျ လမျးလြှောကျခွငျး က ဗိုကျအောငျ့စတေတျပွီး၊ ထမငျး ဟငျး ထဲမှပါဝငျသော အာဟာရ စုပျယူရနျ အတှကျ အစာခြေ စံနဈကို အနှောငျ့ အယှကျဖွဈ စေ တတျ သညျ။ ကနျြးမာရေး နဲ့ ညီညှတျစဖေို့ အတှကျ ထမငျးစားပွီး ပါက အနညျးဆုံး ၁၅ မိနဈခနျ့ မတျတပျ ရပျနပေါ (သို့မဟုတျ) ဖွညျးဖွညျး မှနျမှနျလမျးလြှောကျပါ။
၈. အားကစား မလုပျပါနှငျ့။
အားကစား မလုပျခငျ အနညျးဆုံး နာရီဝကျ မှ အမြားဆုံး ၂ နာရီ ခနျ့ ကွိုတငျ၍ ထမငျးစားထားပါ။ သို့မဟုတျ ပါက၊ အကွော ဆှဲခွငျး (သို့မဟုတျ) ရုတျတရကျနှလုံးခုနျ ရပျတနျ့ခွငျး (သို့မဟုတျ) အသကျသစေနေိုငျသညျ။
Source: lwin pyin (Myawady Health)
၁. ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့်။
ထမင်းစားပြီးနောက် စီးကရက် ၁-လိပ်သောက်ခြင်းသည် သာမန် အချိန် စီးကရက်၁၀-လိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ညီ မျှပြီး၊ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာပိုများကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင် များက သတိပေးထား သည်။
၂. သစ်သီးများ အလျင်စလို မစားပါနှင့်။
ထမင်စားပြီးနောက် အချိုပွဲ သစ်သီးစားခြင်းသည် မှားယွင်းသော အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်နေကြပါသည်။ အမှန် အားဖြင့် ထမင်းစား ပြီးပြီးချင်း သစ်သီးစားခြင်းက လေပွစေပြီး၊ အစာအိမ်ကို ဘေးဥပါသ်ဖြစ်စေ၏။ ထို့ ကြောင့် ထမင်းစားပြီး အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့်ကြာမှသာ သစ်သီး စားသင့်သည်။
၃. လ္ဘက်ရည် မသောက်ပါနှင့်။
လ္ဘက်ရည် အချိုခြောက်ထဲတွင် အက်ဆစ်ဓာတ် အမြောက်အများ ပါရှိကြပေရာ၊ ၄င်းတို့ က ထမင်း ဟင်းထဲ တွင် ပါရှိသည့် ပရိုတင်း များကို အနှောင့် အယှက်ပြုကာ အစာချေဖျက်မှု ကိုလည်း ဟန့် တားစေပါသည်။
၄. ခါးပတ်ကြိုး မလျော့ပါနှင့်။
ထမင်း စားပြီးပြီးချင်း ခါးပတ်ကြိုး (သို့ မဟုတ်) ပုဆိုး၊ လုံချည်လျော့ဝတ်ခြင်း က အူသိမ် အူမ တို့ ကို လိမ်ခေါက်၍ အူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ စေပါသည်။
၅. ရေ မချိုးပါနှင့်။
ထမင်းစားပြီးနောက် ရေချိုးခြင်းသည် လက်/ခြေထောက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးရှိ သွေး လည်ပတ်စီးဆင်း မှု တိုးပွားလာပြီး၊ အစာအိမ် တဝိုက် သွေးလည်ပတ် စီးဆင်းမှု လျော့ကျ လာသောကြောင့် အစာ အိမ်ကောင်း စွာ အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ပေ။
၆. သွက်သွက် လမ်း မလျှောက်ပါနှင့်။
ထမင်း စားပြီးချင်း ခပ် သွက်သွက် လမ်းလျှောက်ခြင်း က ဗိုက်အောင့်စေတတ်ပြီး၊ ထမင်း ဟင်း ထဲမှပါဝင်သော အာဟာရ စုပ်ယူရန် အတွက် အစာချေ စံနစ်ကို အနှောင့် အယှက်ဖြစ် စေ တတ် သည်။ ကျန်းမာရေး နဲ့ညီညွတ်စေဖို့ အတွက် ထမင်းစားပြီး ပါက အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့်မတ်တပ် ရပ်နေပါ (သို့ မဟုတ်) ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်လမ်းလျှောက်ပါ။
ထမင်းစားပြီး ချက်ချင်း လှဲအိပ်ခြင်းသည် အစာကောင်းစွာ မကျေညက်စေတော့ဘဲ၊ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်စေ သည့်ပြင်၊ အူ များကို ကူးစက်ရောဂါပိုး ဝင်စေသည်။
၈. အားကစား မလုပ်ပါနှင့်။
အားကစား မလုပ်ခင် အနည်းဆုံး နာရီဝက် မှ အများဆုံး ၂ နာရီ ခန့် ကြိုတင်၍ ထမင်းစားထားပါ။ သို့ မဟုတ် ပါက၊ အကြော ဆွဲခြင်း (သို့ မဟုတ်) ရုတ်တရက်နှလုံးခုန် ရပ်တန့် ခြင်း (သို့ မဟုတ်) အသက်သေစေနိုင်သည်။
Previous: ဝိတျခနြခြေိနျမှာ ဗိုကျမဆာအောငျ ထိနျးခြုပျနိုငျနညျ့ နညျးလမျးမြား
Next: ရနှေေးကွမျး စှဲသောကျခွငျးနှငျ့ ဆီးလမျးကွောငျး ကြောကျတညျခွငျး အန်တရာယျ